७० दिनको लकडाउनले सर्वसाधारणलाई हातमुख जोड्नै अप्ठेरो भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने आफ्ना कर्मचारी पाल्न भन्दै कर तिर्न उर्दी जारी गरेका छन्। लकडाउन खुकुलो बनाउन माग गरिरहेका ब्यवसायीलाई वेवास्ता गर्दै खतिवडाले लकडाउनकै बीच कर तिर्न उर्दी जारी गरेका हुन्। जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन घोषणा गरेको सरकारले जेठ २५ गतेभित्र सबै कर तिर्न भनेको छ। यदि कसैले तिरेन भने कारवाही गर्ने धम्की पनि दिएको छ।
निजी क्षेत्रका कर्मचारी साढे १२ प्रतिशत तलबमा चित्त बुझाउनु परेको छ। सरकारी कर्मचारीको तलब चै घट्नु पर्दैन ? भनेर पनि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ। बजेटमा केही पनि राहत प्याकेज नल्याउने, उल्टो करको बोझ थप्ने अर्थमन्त्रीले यो बेला आएर कर उठाउनु अति नै दादागिरी भएको पनि कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्। एक ब्यापारीले कान्तिपथसंग प्रश्न गरे 'सरकार हामीलाई घर भाडा नलिन भन्छ, ७० दिनसम्म घरभित्र थुनेर कर कसरी तिर्ने ? यो त तानाशाही शैली भयो' !